Raw Letrozole (Femara) uzuzu (112809-51-5) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Ọgwụ PCT / Letrozole (Femara) ntụ ntụ
SKU: 112809-51-5. Category: Ọgwụ PCT
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Letrozole (Femara) ntụ (112809-51-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Letrozole (Femara) uzuzu uzuzu
Letrozole (Femara) ntụ ntụ bụ isi Characters
Molekụla Formula: C17H11N5
Ọbara arọ: 285.31
Letrozole (Femara) uzuzu eji eme ihe na steroid
Aha njirimara: letrozole (LET roe zol)
Aha aha: Femara (CAS 112809-51-5)
(Femara ntụ ntụ) Letrozole ntụ ntụ Usage
Dịka ntuziaka n'ozuzu, ana m akwado banyere 0.36 mg / ụbọchị dị ka isi ihe maka ọnụọgụ nke anabolic steroid na ọnụ ọgụgụ dị ala nke steroid aromatizable, dịka 200-300 mg / week testosterone. N'okwu dị elu dịka 750 mg / izu, ego a ga-abụ okpukpu abụọ. O nweghị ihe karịrị 1 mg / ụbọchị ọ gwụla ma ọ bụrụ na ọbara anwale na-egosi ịdị elu dị elu nke estradiol ọbụna na ọkwa ahụ, mana nke ahụ adịghị njọ.
Ịdọ aka ná ntị na (Femara ntụ ntụ) Letrozole ntụ ntụ
Ọ bụ ezie na o yighị ka nwanyị na-alụ nwanyị ga-amụ ime, Femara nwere ike imerụ nwa e bu n'afọ. Ejila ọgwụ a ma ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ nwee ike ime ime. Jiri nchịkwa ọmụmụ dị irè ma ọ bụrụ na ị naghị agafe ime mpụ, ma dọkịta dọkịta ozugbo ma ọ bụrụ na ị dị ime n'oge ọgwụgwọ.
A maghị ma letrozole na-abanye n'ime mmiri ara ara ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ nwere ike imerụ nwatakịrị nọọsụ. Ekwesighi ka ị na-azụ ara nwa mgbe ị na-eji Femara.
Ndị ọgwụ ndị ọzọ nwere ike iji letrozole na-emekọ ihe, gụnyere ọgwụ ọgwụ na ọgwụ ndị na-ere ọgwụ, vitamin, na mkpụrụ osisi. Gwa onye ọ bụla n'ime ndị na-elekọta gị ahụike gbasara ọgwụ niile ị na-eji ugbu a na ọgwụ ọ bụla ị malitere ma ọ bụ kwụsị iji.
(Femara ntụ ntụ) Letrozole ntụ ntụ Marketing
IV. Esi zụta Femara ntụ ntụ (CAS 112809-51-5): zụta Letrozole ntụ ntụ si AASraw?
AAS raw na-enye ọcha 98% Letrozole / Femara raw ntụ ntụ si bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka njigide ojiji.
PCT Letrozole raw ntụ ntụ-ise ihe m ga-ama !!!